Olee otú Agba isi chọpụtara? - 💡💻 Iris - Software maka Eye nchedo, Health na Productivity 🛌👀
Olee otú Agba isi chọpụtara?
A retina na-ihu ọma mee nke photoreceptors maara dị ka cones na mkpara.
Mkpara nọ na mpụta nke anyị retina na ha na-aka na abalị ọhụụ.
N'akụkụ aka nke ọzọ, na cones na-dị na etiti nke retina na cones-enyere anyị aka ịghọta na agba ndị na ehihie.
The cones na-eme dị iche iche wavelengths nke ìhè. Ihe kpatara ya bụ na ha na-genetically nzobe na ụdị na ego nke pigmentation.
The X chromosome esetịpụ mkpụrụ ndụ ihe nketa na n'ịwa pigments na cones na-chọrọ ịchọpụta na agba.
Adịghị ama ama, ma ọ bụrụ na mkpụrụ ndụ ihe nketa na koodu na cones ike nke ink na-nzobe eboro mgbe ahụ, ọ pụtara na pigments na-ezighị ezi.
Nke a bụ ihe mere nke na agba isi ma ọ bụ na agba erughi.
Reason nke Agba Blindness
Dị ka ọmụmụ a hụrụ ya na ụmụ nwoke na-ata ahụhụ site na agba isi na a buru ibu n'ọtụtụ dị ka iji tụnyere nwanyị.
Ndị ogbenye cone ibu ga-eduga ndị ogbenye acuity nke na agba, karịsịa na atọ isi agba i.e. green, acha uhie uhie na-acha anụnụ anụnụ.
na-emekarị, na protanopia, e nwere ụkọ nke red foto anabata na-acha uhie uhie anya dị ka nwa.
E nwekwara a belatara uche nke odo na oroma.
The deuteranopsia bụ erughi nke green anabata.
Nsogbu a bụ obere ma nwere ike ime ka ndị mmadụ niile afọ otu. Tritanopia bụ nsogbu ọzọ.
Nsogbu a emee n'ihi na erughi nke-acha anụnụ anụnụ na-anabata ya. Some other reasons of color blindness are age related disorders such as diabetic retinopathy, macular mbelata, trauma, and the deficiency of vitamin A.
dị iche iche barbiturates, ọbara mgbali elu ọgwụ na ọgwụ nje nwere ike-emetụta agba nghọta.
Olee nchọpụta nsogbu?
The ketara agba ọhụụ insufficiency na-adịkarị chọpụtara na nwata na ojiji nke mfe echetakwa ule.
Dị iche iche ule ndị dị ka Ishihara Agba efere na The Hardy-Rand-Rittler, commonly known as H-R-R are used to evaluate the degree and type of color insufficiency.
Ma nke ule, onye na-jụrụ were na acha shapes ma ọ bụ nọmba na-edina na a ngwakọta nke ntụpọ na iche na ike na agba.
The dọkịta iche na were ihe insufficiency dabeere na onye na-azaghachi.
Dị iche iche nke jikoro nwere ike iwere iji obibi nsogbu a.
Ụfọdụ ndị mmadụ na-amụta Ọdịdị nke ghọtara na dị iche iche na agba site na ha na ọnọdụ ma ọ bụ ihie, dị ka isi nke odo, green na-acha uhie uhie na a okporo ụzọ ìhè.
The acha anya m na pụrụ iche iko nwekwara dị na ahịa nke na-enyere na normalize na agba.
nweta Vision ka obi sie na ị na-agaghị na-atụ uche nke okwu na ọnụ ọgụgụ n'ihi na gị colorblindness nke.
Ọ ga-enyere gị jikwaa ihuenyo dị ka ndị na agba na i nwere ike ịhụ n'ụzọ doro anya.
Cambridge agba ule
Cambridge agba ule bụkwa otu n'ime ahụkarị ụdị ule nke e iji ịchọpụta agba isi.
Nke a ule bụ dị ka Ishihara agba ule, ma ọ weere na a na kọmputa na ihuenyo.
Na ule a, onye ọrịa na-jụrụ oyosio akwụkwọ ozi C si dị iche iche na-ese iche.
Ọ dị mma na ị na-ahụ taa ma ị bụ colorblind ma ọ bụghị.